कसरी मिलाउने दर र व्रतको सन्तुलन ? – Health Post Nepal
कसरी मिलाउने दर र व्रतको सन्तुलन ?
२०७५ भदौ २६ गते ९:५४
पछिल्ला दिनमा नेपाली समाजमा परम्परागत सांस्कृतिक चाडपर्वहरू भड्किलो पाराले मनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । मौलिक चाडपर्वको विशेषता र महत्वको ख्यालै नगरी देखासिकी र लहैलहैमा विकसित चाडपर्व मनाउने रबाफिलो शैलीले सांस्कृतिक प्रदूषण त निम्त्याएको छ नै, मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पुर्याइरहेको छ । अहिले नेपाली हिन्दू महिलाको महान् चाड तिज हामीसामु छ । तिजको अघिल्लो रात आ–आफ्नो घरमा छोरीचेलीसहित भई विभिन्न सात्विक परिकारहरू तयार गरी दर खाने हाम्रो मौलिक प्रचलन हो । तर आजकल, तिजको महिनौँ दिनअघिदेखि पिकनिक वा भव्य पार्टी बिर्साउने गरी दर खाने–खुवाउने नाममा हुने गरेको प्रतिस्पर्धाले तिजको मौलिकपनलाई क्रमशः मासिरहेको छ ।
भर्खरै मात्र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको एक सहकारीले आयोजना गरेको दर खाने कार्यक्रममा सहभागी चार सयभन्दा बढी मानिस एकैसाथ बिरामी भएको घटनाले पनि भड्किलो तिज संस्कृतिले निम्त्याएको स्वास्थ्य असरलाई उजागर गर्छ । तसर्थ, तिजको मौलिकपनलाई जोगाउँदै दरका नाममा गरिने असन्तुलित वा अत्यधिक भोजन र लगत्तै प्रतिकूल स्वास्थ्य भएका महिलाले समेत बस्ने गरेको कठोर व्रतका कारण आइपर्न सक्ने विविध स्वास्थ्य समस्याबाट बच्नु हामीमाझ दोहोरो चुनौती छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर सन्तुलित, स्वस्थकर दरको चयन, व्रत बस्ने उपयुक्त तरिका, व्रतपछि सामान्य अवस्थामा फर्कने विधिलगायत विविध विषयमा पोषणविद् केदार पराजुलीसितको कुराकानीमा आधारित जानकारीमूलक सामग्री ।
पोषण शाखा प्रमुख,
अहिले घर र घरबाहिर पनि दर खाने प्रचलन छ । घरबाहिर दर खाएकै कारण कतिपय ठाउँमा मानिसहरू बिरामीसमेत भएको पाइएको छ । तिजमा खाइने दरमा खिर, तरकारी, मिठाइलगायत सधैँ खाइने परिकारभन्दा चिल्ला खानेकुरा बढी समावेश गरिएको हुन्छ, जसले अपच तथा ग्यास्ट्रिकको समस्या आउन सक्छ ।
दरमा मानव शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्वहरू कार्बाेहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, खनिज, चिल्लोपदार्थ तथा पानीको मात्रा हुनुपर्छ । तर, खानेकुरा मिठो पाएमा एकैपटक धेरै खाने प्रचलन हटाउनुपर्छ । छोटो–छोटो समयको अन्तरालमा थोरै–थोरै मात्रामा खानेकुरा खाइराख्नु राम्रो मानिन्छ ।
कतिपय पार्टीप्यालेसहरूमा खुवाइएको खाना ताजा नभएको समेत पाइएको छ । त्यसका लागि तिजमा खाइने खानाको ताजापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यदि आफैँले खाना बनाउनुहुन्छ भने खाना पकाउनेक्रममा त्यसको सफाइ तथा गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । आफैँले पकाएको खानेकुरामा पनि घिउ, तेल, चिनी तथा मसालेदार परिकारको प्रयोग कम गर्नु राम्रो मानिन्छ । व्रत बस्नुअघि खाइने दर सफा, शुद्ध र स्वच्छ तथा पौष्टिक तत्व समावेश भएको हुनुपर्छ, जसले व्रतको दिनमा पनि ऊर्जा प्रदान गर्न मद्दत गर्छ । दरमा मानव शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्वहरू कार्बाेहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, खनिज, चिल्लोपदार्थ तथा पानीको मात्रा हुनुपर्छ । तर, खानेकुरा मिठो पाएमा एकैपटक धेरै खाने प्रचलन हटाउनुपर्छ । छोटो–छोटो समयको अन्तरालमा थोरै–थोरै मात्रामा खानेकुरा खाइराख्नु राम्रो मानिन्छ ।
जिब्रोको स्वादका लागि मिठो परिकार धेरै खान मन लागिहाले पनि आत्मनियन्त्रणमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । खानेकुरा कम तथा पानी प्रशस्त मात्रामा पिएमा खाएको खानेकुरा विष बन्न पाउँदैन ।
आवश्यकताभन्दा बढी खाएमा त्यसले पाचन प्रक्रियामा असर पुर्याउँछ । धेरै खाएमा शरीरले पचाउन नसक्ने हुन्छ । यसबाट बान्ता हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यसका साथै आवश्यकताभन्दा बढी खानाले मोटोपन निम्त्याउन सक्छ । बढी मात्रामा मोटाउनु वा दुब्लाउनु दुवै अवस्थालाई कुपोषणको अवस्था भनिन्छ । करिब ३ प्रतिशत कुपोषणको कारण बढी मात्रामा पोषणको आपूर्ति शरीरमा हुनु रहेको छ ।
सबैभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा त फुड पोइजनिङ नहोस् भन्ने हो । आवश्यकताभन्दा बढी खानाले शरीरले पचाउन सक्ने क्षमतामा समस्या आउँछ, जसका कारण फुड पोइजनिङ हुने गर्छ । त्यसैले छोटो समयको अन्तरालमा थोरै–थोरै खानु राम्रो मानिएको हो । पेटसम्बन्धी रोग लागेका व्रतालुले तिजमा व्रत बस्ने परम्परालाई जीवितै राखेर पनि विभिन्न खानेकुरा खान सक्छन् । जस्तै, दूध, फलफूललगायत अन्नबाहेकका खानेकुराको प्रयोगबाट खानाजति नै इनर्जी शरीरले पाउन सक्छ । व्रत बस्दा शुद्ध खानेकुरामा ध्यान दिन व्रतालुहरूमा मेरो आग्रह छ । बिरामीले रोगको प्रकृतिअनुसार व्रत बस्नु राम्रो मानिन्छ । विशेषगरी मधुमेहका बिरामीले व्रत नबस्नु नै राम्रो हुन्छ ।
व्रतका दिन निराहार हुने भएकाले शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन गई विभिन्न प्रकारका समस्या सिर्जना हुने गर्छन् । शरीरमा पानीको मात्रालाई सन्तुलनमा राख्न पर्याप्त पानी पिउनुपर्छ । मधुमेहका बिरामी व्रतका दिन खालीपेट बस्दा शरीरमा चिनीको मात्रा कम हुन्छ । यो स्वास्थ्यका लागि खतरनाक मानिन्छ । त्यसैले यस्ता बिरामीले निराहार व्रत बस्नुहुँदैन । उनीहरूले दही, रोटी, खिरलगायत खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ । दिनभर निराहार बस्नेहरूले साँझमा धेरै चिल्लो खानेकुरा नखाई दूध, दही, फलफूललगायतको सेवन गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
त्यसैगरी, व्रतको भोलिपल्ट सबैभन्दा पहिले कालो चिया खानुपर्छ । त्यसपछि तेल, मसलालगायतको प्रयोग कम भएका खानेकुरालाई बिहानीको खानाका रूपमा प्रयोग गरेपछि मात्र बिस्तारै अन्य समयजसरी नै सामान्य खानेकुराको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । फलफूल, गेडागुडी तथा फाइबरयुक्त खानेकुरा बढी खानु राम्रो मानिन्छ । खानाको मात्रा कमै गरेको राम्रो हुन्छ ।
त्यसैले जिब्रोको स्वादका लागि बाहिरको खानेकुरा खानु राम्रो मानिँदैन । स्वादका लागि मिठो भए पनि त्यसले शरीरलाई लामो समयसम्म असर गर्छ । खानैपर्ने अवस्थामा सागपात, फलफूल तथा फाइबरयुक्त खानेकुराको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । मिठाइ तथा माछामासु बढी खानु राम्रो मानिँदैन ।
सकभर लामो समयसम्म भोको बस्नुहुँदैन । सबै मानिसको शरीर एकै प्रकृतिको हुँदैन । कोही १२ घण्टासम्म पनि भोकै बस्न सक्छन् भने कोही ४ घण्टा पनि बस्न सक्दैनन् । धेरै समयसम्म भोकै बसेर एकैपटक आवश्यकताभन्दा बढी खाना खानु पनि स्वास्थ्यका दृष्टिले हितकर हुँदैन । भोको बस्ने कुरा प्रत्येक व्यक्तिको शारीरिक संरचनामा निर्भर रहन्छ । व्यक्तिको उमेरमा पनि यो कुरा निर्भर हुन्छ । सामान्यतया ८ घण्टासम्म भोकै बस्दा शरीरलाई खासै ठूलै समस्या भने पर्दैन । यदि त्योभन्दा बढी भोको बसेमा शरीरमा इनर्जीको कमी हुँदै जान्छ ।
तिजका वेला तथा अन्य समयमा पनि बाहिरको खानेकुरा सकभर नखाएकै राम्रो मानिन्छ । बाहिरको खानेकुरा कम हाइजिनिक हुने गर्छ । साथसाथै, त्यसलाई स्वादिलो बनाउनका लागि विभिन्न कृत्रिम सामग्रीहरू मिलाइएको हुन्छ । त्यसैले जिब्रोको स्वादका लागि बाहिरको खानेकुरा खानु राम्रो मानिँदैन । स्वादका लागि मिठो भए पनि त्यसले शरीरलाई लामो समयसम्म असर गर्छ । खानैपर्ने अवस्थामा सागपात, फलफूल तथा फाइबरयुक्त खानेकुराको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । मिठाइ तथा माछामासु बढी खानु राम्रो मानिँदैन ।
मानिसको शरीरलाई सधैँ पोषणयुक्त खानाको आवश्यकता पर्छ । पोषणयुक्त खानेकुराबेगर शरीर चल्न सक्दैन । अहिले तिज आउनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै तिज लागिसकेको हुन्छ । तिजमा बाहिरको खानेकुरा खाँदा त्यसले शरीरमा पार्ने असरबारे ध्यान दिन म आग्रह गर्छु । ‘स्वास्थ्य नै धन हो’ भन्ने कुरालाई मनन गरी तिज मनाउन मेरो आग्रह छ । शारीरिक रूपमा बाधा नपर्ने गरी तिज मनाउनु राम्रो हुन्छ ।
खानेकुरासँगै ड्रिंक्सको प्रयोग गर्नु हानिकारक मानिन्छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा लिभरमा आक्रमण गर्छ । यसले रक्तसञ्चार प्रणालीमा समेत असर गर्छ । सकेसम्म पिउनु राम्रो मानिँदैन, यदि पिउनैपर्ने अवस्था आएमा ३० एमएलभन्दा बढी पिउनु स्वास्थ्य तथा पोषण दुवै दृष्टिकोणले राम्रो मानिँदैन । एक प्याकसम्म खानाले शरीरलाई खासै असर गर्दैन ।
One thought on “कसरी मिलाउने दर र व्रतको सन्तुलन ?”
दिपक प्र तिवारी says:
अत्यन्तै सान्दर्भिक र चेतनामुलक सन्देश युक्त लेख, यस्तै लेखनले निरन्तरता पाओस दाजु, शुभकामना छ ।